#Xukumadda Soomaaliya oo ansixiyey heshiisyo lala galay Dal Carbeed - Get Latest News From Horn of Africa
#Xukumadda Soomaaliya oo ansixiyey heshiisyo lala galay Dal Carbeed
Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa maanta waxa guddoomiyay shirka golaha wasiirrada.
Shirka ayaa looga hadlay u diyaar garowga iyo qaban-qaabada maalamha xorriyadda dalka iyo midnimada, waxaana warbixin laga dhagaysay guddigii dhawaan uu Khayre u magacaabay ka shaqaynta munaasabadaha muhiimka ah.
Kulanka ayaa sidoo kale warbixin looga dhagaystay wasaaradda amniga gudaha oo soo bandhigtay horumarrada laga gaary sugidda amniga iyo qorshaha lagu horumarinayo.
Fahfaahinta ama nuqulo kamid ah heshiiskaasi ayaa nan loosoo bandhigin saxaafadda. Si lamid ah lama ogga hadii ay Laanta Fulinta u gudbin doonto baarlamaanka.
Xildhibaano ka tirsan labada dal ayaa horey uga dhawaajiyey in heshiisyadii ay horey dowlada ula gashay qaar kamid ah dalalka caalamka aanan la horkeeni goleyaasha.